KTM 450 Rally Replica Available to Order – Motorcycle USA | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
ATV ရင်းမြစ် - သတင်းထုတ်ပြန်ချက် - Nac ရဲ့ / Cannondale POS ... (34592)
'01 1500 FI Drifter, အဘယ်သူမျှမမီးပွား - Kawasaki ဖိုရမ် (10881)
KTM ပြိုင်ပွဲဘလော့ (7946)
Pampanga အဘိဓါန် Karylle Solana နိုင်ငံ H ကိုခုနှစ်တွင်အိမ်လော ... (5657)
KTM Duke 125/200 RaceDynamics PowerTRONIC afte ရ ... (5444)
ဟွန်ဒါ 1960 ကနေခြောက်လဆလင်ဒါဆိုင်ကယ် rc166 (5351)
Home → KTM → KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် - မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
20 Jun 2015 | စာရေးသူ: dima | Comments Off on KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင် – မော်တော်ဆိုင်ကယ်ယူအက်စ်အေ
KTM 450 အမိန့်ချီတက်ပွဲပုံတူရှိနိုင်
အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကမှလာမယ့်ပါလိမ့်မည်လျှင်မူကားကမရှင်းလင်းမယ့်.
KTM သည်၎င်း၏ 13 နှစ်ဆက်တိုက် Dakar ပြိုင်ပွဲများတွင်အနိုင်ရ notched 2014, မာ့ခ်မေ့မြောနီးပါးနှစ်နာရီရှေ့ကသူ၏အရင်းနှီးဆုံးယှဉ်ပြိုင်ပြီးသွားနှင့်အတူ. အဆိုပါစပိန်ရဲ့လက်နက် KTM ရဲ့တစ်ဦး updated version ကိုခဲ့သည် 450 ဆန္ဒပြစက်ဘီး, လိမ္မော်ရောင်အမှတ်တံဆိပ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရာ၏ version တစ်ခုမကြာမီအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါ KTM 450 ဆန္ဒပြပွဲပုံတူတဲ့ဒီဇိုင်းသည် frame နှင့် updated Ergonomics features, အသစ်ကနောက်ဘက်ရပ်ဆိုင်းမှုနှင့်ပြိုင်ပွဲ-သက်သေပြ, လောင်စာဆီ-ထိုးသွင်း 450cc အင်ဂျင်ကို. ဆန္ဒပြပွဲတာဝန်များအတွက်ပုံတူအကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့လည်းတစ်ဦးရှေ့နှင့်နောက်လောင်စာ-pump များနှင့်အများအပြားင့်ကားများနှင့်အတူကြွလာ.
အဆိုပါမယ့်စျေးနှုန်း, အောက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကညွှန်ပြအဖြစ်, EUR ဖြစ်ပါသည် 24,000, ဤဆောင်းပါး၏စာအဖြစ်ရသောဝန်းကျင်ဖို့ပြောင်းပေး $32,988. အဆိုပါပြိုင်ပွဲပုံတူကိုအမေရိကန်ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ရှိမရှိမသိရသေးဒါဟာင်. – MotoUSA Byron Wilson
The new model of the KTM 450 စက်ရုံ livery အတွက်ဆန္ဒပြစက်ပြိုင်ပွဲအခြေအနေများအတွက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအဖြစ်မော်ရိုကိုချီတက်ပွဲမှာအောက်တိုဘာလအတွင်းက၎င်း၏ပွဲဦးထွက်ကိုဖန်ဆင်း. စက်ထို့နောက် Dakar မှာအဆုံးစွန်စမ်းသပ်မှုအပေါ်တာမှဘာသာရပ်ခဲ့သည်, နှင့်ဆိုင်ကယ် KTM ရဲ့ 13 နှစ်ဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိယူ On-board ကိုမာ့ခ်မေ့မြောအတူ 9,000km ပြိုင်ပွဲတလျှောက်လုံးအပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်လုပ်သွား.
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲစက်၏ယခင်မော်ဒယ် 690cc ခေတ်အဘို့တည်ဆောက်ခဲ့သည်နှင့်အမျှ, this new machine was designed from the ground up to be suited to today’s Dakar terrain and the smaller capacity 450cc engine. With its vast amount of experience, KTM’s Motorsport department built the new bike with KISKA’s expertise in design from clay model to completed design, along with KTM’s RD department and KTM Technologies.
KTM 990 အဖြစ်အပျက်
FT: 2006 ktm 560 smr supermoto – PNW မွငျးစီးစ
KTM 990 KTM စူပါ Duke,
ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX ̵...
20.06.2015 | Comments Off on ပထမဦးစွာရလဒ်ပြသမှု: 2005 KTM 125 SX နှင့် 250 SX – Transworld Motocross
19.06.2015 | Comments Off on KTM 350 နှင့် 450 SX-F ကို – သံသရာ torque မဂ္ဂဇင်း
19.06.2015 | Comments Off on 2010 KTM 300 XC-W ဆန်းစစ်ခြင်း –
KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990 Adventure Baja...
19.06.2015 | Comments Off on KTM ရောင်းတော်မူမည် 2013 690 Duke ပြီးတော့ 990 မြောက်အမေရိကခုနှစ်တွင်စွန့်စားမှုဘာဟာ & Models
စက်ဘီး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, News on all ...
19.06.2015 | Comments Off on စက်ဘီး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပစ္စည်းများ, ဝန်ဆောင်မှု, အားလုံး Ducati အပေါ်သတင်းများ, KTM နှင့် Husaberg…
KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! – Overdrive
19.06.2015 | Comments Off on KTM Duke-based ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲစူးစမ်း! – Overdrive
2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို- Riding Impressi...
19.06.2015 | Comments Off on 2012 KTM 450 SX-F ကိုစက်ရုံ Edition ကို- ရလဒ်ပြသမှုကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းစီးနင်း
19.06.2015 | Comments Off on 2009 KTM 990 ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း @ ပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲ T ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြန်လည်သုံးသပ်
ဟွန်ဒါ DN-01 ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို Aprilia Mana 850 ဆူဇူကီး AN 650 Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် စမတ် eScooter ဆူဇူကီး Colleda CO မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို Bajaj Discover စက်ဘီး Kawasaki ER-6n အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype Ducati Desmosedici GP11 Ducati Diavel ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati 60 Brammo Enertia